I-Stainless Seteel Pillow Block Bearing
I-Tapered Roller Bearing
I-Trust Ball Bearing
I-Single Row Cylindrical Roller Bearing
I-Double Row Cylindrical Roller Bearing
Olunye Uhlobo Lokuthwala
I-Needle Roller Bearing
I-Angular Contact Ball Bearing
I-Polyurea Base Lubricant Grease
I-Silicone Lubricant Grease
Ungawakhetha Kanjani Amathuluzi Omshini We-CNC Alungile Wokukhiqiza: Umhlahlandlela Ophelele
Imishini ye-CNC iyihhashi elinamandla uma kuziwa ekwenzeni isethi ehlukahlukene yobunjiniyela nezinqubo zokukhiqiza. Ukusuka emabhodleleni epulasitiki okubumba umjovo kuya ekwenzeni izingxenye ze-aerospace - akukho lutho umshini we-CNC ongeke ukwazi ukukufeza. Imishini efana nemishini yokugaya i-tabletop inga...
Yini eholele kulesi simo? - Ucwaningo lwesigameko
Konke kuhamba kahle? Lokho akufanele kusenze sibe amaphampu angabonakali angu-18 ngaphansi kwesibopho sethimba Lokuqapha Isimo, elibonisa ukuziphatha okucishe kufane, okunezimpawu ezifanayo… futhi kudinga ukunakwa okuphelele. Umsebenzisi (okusho umngane, ilungu lomndeni we-SDT) ungicele ukuthi ngisize...
ISAZISO SAMAHOLIDI ESIPHAKATHI SESI-AUTUMN FESTIVAL 2021
Ungawakhetha Kanjani Amathuluzi Omshini We-CNC Afanele Wokukhiqiza: I-Ultimate Guide Imishini ye-CNC iyihhashi elinamandla uma kuziwa ekwenzeni isethi ehlukahlukene yobunjiniyela nezinqubo zokukhiqiza. Ukusuka kumabhodlela epulasitiki okubumba umjovo kuye ekwenzeni izingxenye ze-aerospace -...
Kungani ukuhamba kwami ​​​​kungazelelwe kwenza umsindo owedlulele?
Amabhere ayizingxenye ezibalulekile kunoma yimuphi ucezu lomshini ojikelezayo. Umsebenzi wabo oyinhloko ukusekela shaft ejikelezayo kuyilapho unciphisa ukungqubuzana ukuze kube lula ukunyakaza okushelelayo. Ngenxa yendima ebalulekile edlalwa ama-bearings emishinini, kubalulekile ukuthi uhlole njalo ama-bearings akho ukuze uthole noma yimaphi ...
Ukuzungezisa izimpahla ezinezingxenye ezimbalwa eziyisipele - kungenzeka!
Phakathi neminyaka engu-16 ngisebenza neRoyal Netherlands Air Force, ngafunda futhi ngathola ukuthi ukuba nezingxenye eziyisipele ezifanele ezitholakalayo noma ezingekho kuthinta ukuba khona kwezinhlelo zobuchwepheshe. Izindiza zimile eVolkel Air Base ngenxa yokushoda kwezingxenye eziyisipele, kanti ezaseKleine-Brogel eBelg...
Imakethe yomhlaba wonke ephethe amabhola kulindeleke ukuthi ikhule ngama- $ 4.12 billion ukusuka ngo-2021 kuya ku-2025, ikhule ngesilinganiso sokukhula sonyaka esingaphezulu kuka-3% ngesikhathi sokubikezela.
Abahlaziyi bemakethe ephethe amabhola emhlabeni jikelele bebeqaphe imakethe ephethe amabhola kusukela ngo-2021 kuya ku-2025, futhi kulindeleke ukuthi ikhule ngezigidi ezingama-US $412 phakathi kuka-2021 kuya ku-2025, ngenani lokukhula elihlanganisiwe lonyaka elingaphezu kuka-3% ngesikhathi sokubikezela. E-New York, Julayi 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlink...
I-RB Running Traces ejwayelekile
I-Traces Ejwayelekile Yokugijima Ye-Roller Bearings (I) ibonisa iringi yangaphandle egijimayo lapho umthwalo we-radial usetshenziswa ngokufanelekile kubheyili yerola eyicylindrical enomthwalo kwiringi yangaphakathi ezungezayo. (J) ikhombisa umkhondo ogijimayo esimweni sokugoba ku-shaft noma ukuthambekela okuhlobene phakathi kwengaphakathi...
Amaphuzu okunakwa ekusetshenzisweni kwama-bearings
Ama-rolling bearings ayingxenye yokunemba, futhi ukusetshenziswa kwawo kufanele kwenziwe ngokucophelela ngokufanele.Kungakhathaliseki ukuthi ama-bearings okusebenza aphezulu asetshenziswa kanjani, uma esetshenziswe ngendlela engafanele, ngeke athole ukusebenza okuphezulu okulindelekile. Okulandelayo yizindaba ezidinga ukunakwa ekusetshenzisweni kwama-bearings. (1)...
Ukuhlaziywa Kwama-Bearings Alimele
Hlola i-rolling elimele ngemva kokuhlakazwa. Ngokwesimo se-bearing elimele, kungahlulelwa ukuthi kukhona iphutha kanye nembangela yomonakalo. 1.Insimbi exebukayo ebusweni bomgwaqo womjaho Izinto eziginqikayo kanye nomgwaqo oyindandatho wangaphakathi nangaphandle ...
Izigaba ezine zokuzala umonakalo wekheji
Lapho ama-bearings esebenza, kancane kancane azodala izinga elithile lomonakalo futhi aguge ngenxa yokungqubuzana, ikakhulukazi lapho esebenza ezingeni lokushisa eliphezulu, futhi ngisho nekheji elithwalayo lizolimala.Ngokwezinga lomonakalo, ngokuvamile lihlukaniswa libe izigaba ezahlukene, ngakho ibhere...
Uhlu lwezinhlobo zemishini yezolimo
Embulungeni yonke, ukusetshenziswa kwezingxenye ezithembekile neziqinile kuyisici esibalulekile ekuqinisekiseni ukuthi imishini yasemapulazini igcinwa isesimweni esihle futhi izitshalo zivunwa ngesikhathi, kungakhathaliseki isimo sezulu noma izici zezitshalo. Ngakho-ke sivame ukusebenzisa zonke izinhlobo zemishini yezolimo, yiziphi izinhlobo zama-bearings ezisetshenziswayo? Gaya...
Pls sitholele whats app number:0086-17685510491.Tks a lot.